१७. जे देख्छो, त्यहि बन्छौ - Harish Bk
Home/ Article/१७. जे देख्छो, त्यहि बन्छौ
-Dr. Yogi Vikashnanda
Harish BK November 8, 2017
‘तिमी जे देख्छौ, त्यहि पाउँछौ ।’ यो भनाइ स्टीभ जब्सको हो । यीनै विचारलाई व्यहावरमा उतार्न उनी तत्पर रहन्थे । अतः आफ्ना कामदारलाई उनी आफूले देखेका सर्वोत्कृष्ट कुराहरु देखाउँथे । नभन्दै एप्पल कम्पनी कम्प्यूटर–जगतमा विश्वकै श्रेष्ठ कुरा बनाउन सफल भयो ।
जस्तो सुकै मान्छेले पनि कुनै न कुनै बेला महान विचारल गर्छ अथवा हरेक मान्छेमा कुनै न कुनै वेला महान विचार फुर्छन् । तर, कसै–कसैले मात्र त्यस विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने कोशिस गर्छ । र, ज–जस्ले विचारलाई वस्तुमा रुपान्तरण गर्ने जमर्को गरे उनीहरु नै सफल व्यक्ति बनेका हुन् ।
तिमी जे देख्छो त्यही पाउँछौ, यो स्टिभ जब्सको अन्तरवोध थियो । उनमा फुरेको सद्विचार थियो । उनले यसलाई विचारमा सीमित नराखी आफ्ना कर्मचारीहरु माथि प्रयोग गरी हेरे । फलस्वरुप कर्मचारीहरु पनि त्यस्तै सुन्दरतम कुरा बनाउन सफल भए । जस्को श्रेय उनै जब्स्ले पाए । उनको विचार र कर्मचारीहरुको प्रयासले आईफोनजस्तो बहुपउपयोगी एवं सुन्दर रचना संसारले पायो ।
प्रसंग बदलौं, यूनिभर्सिटी कलेज अफ् लण्डनका प्रोफेसर् रुथ क्याम्प्बेलले पछिल्लो समय एउटा अद्भूतकुरा पत्ता लगाएका छन् । उनले मानव–मस्तिस्कमा एक भिन्नै खाले कोश ठम्याएका छन् । जस्ले अगाडी जे जे देखिन्छ त्यसको हुबहू नक्कल गर्न शरीरलाई उक्साउँछ । त्यस कोशलाई उनले मिररिङ्ग सेल भनी नामांकरण गरेका छन् । यीनै कोश समूहले गर्दा मान्छेले जे देख्छ, ऊ पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ । अर्थात दुखी मान्छे
देखियो भनी हाम्रो अनुहार खुम्चिन थाल्छ र मन कुँडिन थाल्छ भने खुसी अनुहार देख्दा आफू पनि उस्तै हुन खोज्छ । त्यस्तै असफल मान्छेको माझमा बसियो भने यी कोशहरुले नजानिदो पारामा असफल हुन उक्साउँछ भने सफल मान्छे देख्दा पनि ऊ जस्तै बन्न बाध्य पार्छ । अतः यस वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई जब्स्ले आत्मसात गरेको देखिन्छ । र त उनी आफ्ना सहयोगीहरुलाई सवभन्दा राम्राकुराहरु जहाँबाट जसरी पनि खोजेर देखाउँथे । यी राम्रा कुरा देख्दा तिनीहरुका मिररिङ्ग सेलले त्यस्तै बनाउन उनीहरुलाई घचघच्याए र त पीसीदेखि आईफोनको जन्म भयो । अतः राम्रो हेरौं, राम्रो सुनौं, राम्रैका संगत गरेर आफू पनि राम्रै बनौं ।